स्वचालित ट्रान्समिसन प्रत्येक वर्ष संग रूसी मोटर चालकहरुलाई बीच थप र अधिक लोकप्रिय बन्नेछ। शहरी क्षेत्रमा (ट्राफिक जाम र भीड) मा प्रसारण "स्वचालित" - ड्राइभर लागि वास्तविक Lifesaver। तर बाटोमा सबै हुन सक्छ, र जब स्वचालित प्रसारण संग शहर कार छोडेर गन्तव्य पुग्न सक्दैन। बिरामी यो केवल एक पेशेवर सेवा स्टेशन सामना गर्न सक्ने यति गंभीर छ। र तपाईं निकटतम तान्नु मेशिन बाट 100 किलोमिटर टाढा हुँदा के गर्छन्? सामना गरौं।
गम्भीर breakdowns को मामला मा वाहन रस्सा नियम
तपाईं तान्नु ट्रक मा रस्सा को संभावना बहिष्कार र कार अप हावा गर्न अस्वीकार भने, यो अवस्था बाहिर मात्र तरिका लचिलो वा सेवा गर्नेछन् कठोर युग्मन। दुवै अवस्थामा, एक कदम बनाउन, तपाईंले आफ्नो इन्जिन चालू गर्न आवश्यक छ। को युग्मन मा जानुअघि, मा स्थिति «एन» चेक बिन्दु लीवर सम्मिलित, र केवल त्यसपछि तान्नु सुरु। यस मामला मा एक कार त आन्तरिक दहन इन्जिन लिटर एक जोडी थप्न रक्षा गर्न, तात्दै विषय हुन सक्छ कि सम्झना प्रसारण तेल।
कसरी उहाँले दुर्घटनामा पायो भने, स्वचालित प्रसारण संग वाहन रस्सा छ?
यो अक्सर कि जब एक सानो frontal इन्जिन प्रभाव वा यसको घटक बस असफल हुन्छ। एक भाँचिएको रेडियेटर संग स्वतन्त्र आन्दोलन असम्भाव्य छ बनाउन। एक युग्मन प्रयोग स्वचालित प्रसारण संग वाहन - रस्सा र यहाँ वर्षौंदेखि सिद्ध एक विधि को सहायता गर्न आउँछ। यो विधि पहिलो मामला समान छ, तर केही nuances यहाँ छलफल गर्नुपर्छ। स्वचालित प्रसारण संग वाहन रस्सा, गति सीमा संग सख्त अनुपालन मा उत्पादित दुर्घटनामा मा पायो। जब मिसिन गति को लचिलो र कठोर युग्मन प्रति घण्टा 50 किलोमिटर को स्तर नाघ्नु हुँदैन। साथै छैन क्रममा इन्जिन गरम करना, सानो विश्रामहरू हरेक 55-60 किलोमिटर बनाउन। यो बाटो निम्न तपाईं कार रोक्न र प्रसारण cooled नभएसम्म प्रतीक्षा छ। अपवाद4गति "स्वचालित" (यो 70 किलोमिटर सम्म सार्न सम्भव छ) छ। स्वचालित प्रसारण र संग वाहन रस्सा सबै-पाङ्ग्रा ड्राइव सधैं सम्मिलित फ्यूज रस्सा संग गरेको छ। आदर्श, को पाठ्यक्रम, विशेष उद्देश्य वाहन मा ओसारपसार गर्न, बन्द-सडक, माथि केबल को ट्रेक्टर वा बुलडोजर गर्न छानिएको। तर यदि यो सम्भव छैन, पहिलो नियम जानुहोस्।
के भने, एउटा कार लायक रोबोट पीपीसी छ? यस्तो रस्सा वाहन कस्तो छ?
सामान्य भन्दा उच्च परिमाण र यहाँ यस्तो प्रसारण अर्डर मूल्य को overpayment बस सान्त्वना वा विश्वसनीयता लागि छैन। एक रोबोट गियरबक्सलाई संग वाहन towed गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई छैन 55, धेरै 100 मी रोक बिना छ छैन 60, र 70। कठोर युग्मन भने, प्रति घण्टा 50 किलोमिटर गति सीमा सधैं पालन। जब लचिलो अतिरिक्त हेरविचार पनि केबल को लम्बाइ बारेमा लिनुपर्छ। यो एक 3- वा6मीटर हुनुपर्छ (यी बिचको दायरामा एउटा सानो त्रुटि अनुमति)। केबल लम्बाइ निकै ठूलो छ भने, यो यस्तो मामला मा कार कम maneuverable हुन्छ किनभने, कार पनि अधिक खतरनाक गर्नेछ। निकै छोटो केबल टकराव खतरनाक। त्यसैले, लचिलो युग्मन गर्दा सधैं केबल को लम्बाइ पालन र उच्च बिभिन्नविचलन अनुमति छैन।
जाडो टायर dunlop Graspic DS3: मालिकको समीक्षा
को फ्रैंकफर्ट मोटर शो मा Bugatti Premiere विजन Gran Turismo
Citroen C4 सिउँडी: विनिर्देशों र समीक्षा
फोर्ड मुस्ताङ मालिक 302 - यो कथा को फिर्ती
थप व्यावसायिक शिक्षा - छ ... व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम
चिनियाँ एसयूवी: मूल्यहरु, फोटो र समाचार। रूस मा बेच चिनियाँ एसयूवी मोडेल
Gevorg Sargsyan: जीवनी, व्यापार, राज्य